Car Grille Badges & Mota Emblem Fekitori - China Car Grille Mabheji & Mota Emblem Vagadziri uye Vatengesi
Wati wakanamatira mu "mota gungwa" uye uchishamisika zvinorehwa nemotokari grille mabheji? Chiratidzo chesimbi pamotokari chinogona kuonekwa muhupenyu hwedu mazuva ese. Chiratidzo chakasiyana chinomirira hunhu uye tsika dzevanhu veko. Paunenge uri muridzi wemota, maitiro ekuichengeta kunze kwemukova usina ruvara kupera, mubvunzo? Isu takakurudzira zvakanyanya izvo zvakaoma enamel zvinhu izvo zvakare zvinodaidzwa kuti cloisonné. Yaive imwe yemhando yeupfu zvinhu inogona kuchengeta iyo chiratidzo chevaravara inogara nekusingaperi. Kunze kweiyo enamel yakaoma, fekitori yedu zvakare ine yekuteedzera yakaoma enamel, yakapfava enamel, kudhinda kupedzisa ese mota bheji logo ruzivo. Imwe neimwe ine hunyanzvi hwekuita nemaoko, gamuchirai kuuya kufekitori yedu kuzotigovana zvaunofarira yenzira yakanaka yekugadzira yako yakanaka mota bheji. Specifications: ● Maitiro: Kugadzira mifananidzo, kutema chakuvhuvhu, kugadzirisa ruvara, kutsva mabwe, kuunganidza matombo, kuungana, kurongedza, kutarisa mhando ● Zvimiro: Inogara yakasimba, inopisa kupisa, isina mvura-chiratidzo, anti-oiri uye inopesana nemota yekuwacha mvura ● Kushanda: kushongedzwa kwemotokari, chiyeuchidzo kana zvipo zvebhizinesi zvekambani yemasangano.